February 11, 2020 - MM Live News
February 11, 2020 February 12, 2020 MM Live News
ကိုယ်စောင့်နတ်အကြောင်းနှင့် လူကို စောင့်ရှောက်ပုံအကြောင်း” မေး > ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ တကယ်ရှိပါသလား၊ ဖြေ > ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်၊ မကောင်းမှုပြုသောသူသည် သူမကောင်းမှုပြုတဲ့အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင်ပတမဦးဆုံးသိ၏ ထိုနောက်သူ၏ကိုယ်စောင့်နတ်သိ၏ ထိုနောက်သူတပါး၏ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်းသိမြင်နိုင်သော် တန်ခိုးရှင်များသိ၏ လို့” ပါရာဇိကဏ်အဌထာ သုဒိန္ဒကဏ္ဍ “အဖွင့်မှာပါတဲ့စာရပ်ကိုထောက်ပြီး လူကိုနတ်စောင့်တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ နောက်မေးခွန်းတခုက … မေး > လူကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်သလည်းဆိုတာပါ၊ ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့ လူကို စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုရှိတဲ့ သူတော်ကောင်းနတ်များက စောင့်ရှောက်ကြပါတယ် ဘုန်းကံမွဲမွဲ လူများကိုတော့ တန်ခိုးသေးနုပ်ပြီး စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှု မရှိတဲ့ နတ်သေးနတ်မွှား လေးတွေက စောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။ တန်းခိုးအင်အားကြီးမားလေ လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုရှိလေမို့ သူလုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏ သူလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ အတိုင်းအတာထဲကနေ ကူညီစောင့်ရှောက် ပေးကြပါတယ်။ ရှေးက […]
အပ်ပါယျလေးပါးသို့ လုံးဝပွနျမလာ တော့သော အလှူဒါနပွုနညျး
February 11, 2020 MM Live News
အပ္ပါယ်လေးပါးသို့ လုံးဝပြန်မလာတော့သော အလှူဒါနပြုနည်း အရှင်သာရိပုတြာမေးလျှောက်သဖြင့် မြတ်စွာဘုရားဖြကြားသော အလှူဒါနပြုနည်း ၇ မျိုး အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် စမ္ပာမြို့ ဂဂ္ဂရာမည်သောရေကန်နီး သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုသို့ သတင်းနေတော် မူသော အခါ ဥပုသ်နေ့ တစ်နေ့၌ ရှင်သာရိ ပုတ္တရာသည်တ်စွာဘုရား၏တရားကို ကြားနာလိုသော ဥပသကာ တို့နှင့် အတူ မြတ်စွာ ဘုရားထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤကဲ့သို့မေားက်၏။ “အရှင်ဘုရား ဒါနချင်းတူပါလျှက် အချို့အကျိုးကြီးပြီး၊ အချို့ အကျိုးမကြီးသော အလှူဒါနဟူ၍ ရှိပါသလာား”ဟု မေးလျာက်၏ ။ထိုကဲ့သို့ ဒါနချင်းတူပါလျှက် အကျိုးပေးမတူခြင်းသည် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပါနည်း ဘုရား” ဤသို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာက မေးလျှောက်သော အခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားတော်မူသည်။ချစ်သားသာရိပုတြာ… ၁။ အချို့သော လူတို့သည် ငါ၏ အလှူဒါနသည် တမလွန်ဘဝ၌ […]
ခါးတှအေရမျးနာ ခေါငျးတှလေဲ တအားကိုကျတော့ အင်ျဂလိပျဆေးတှေ မသောကျခငျြတော့ဘူးဆိုသူမြားအတှကျ
ခါးတွေအရမ်းနာ ခေါင်းတွေလဲ တအားကိုက်တော့ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ မသောက် ချင်တော့ဘူး ဆိုသူ များ အတွက် နည်းဘမ်းလေးပေး ချင် လို့ပါ ။ သင်္ဘောရွက် နှင့် ထန်းလျှက်ခဲ ခါးတွေအရမ်းနာ ခေါင်းတွေလဲ တအားကိုက်တော့ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေလဲ ခဏခဏ မသောက်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီး အိမ်တွင်းဆေးလေး လုပ်ကြည့် တယ် ။ သဘောင်္ရွက်လေး တရွက် ခူးလာပြီး ရေနွေးဆူဆူမှာ ခပ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ ၃ မိနစ် လောက်ရရင် ထန်းလျှက်ခဲလေး ၃လုံးလောက် ထည့်ကျို လိုက်ပြီး ၃ မိနစ် လောက်ထပ်ကျို ပြီးရင် အရည်ကျ လာပါပြီ။ အဲဒီတော့ ဖန်ခွက်အကြီးနဲ့ ကိုယ်သောက်နိုင် သလောက်ထိ သောက် တယ် ။ သောက်ပြီး ၁၀ မိနစ် […]
ပလက်ဖောင်းမရှိတဲ့ တိုင်းပြည် မြန်မာပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဗျ ။ ငါ့အခွင့် အရေးပဲ ရှိတယ် ။ ဒီတိုင်းပြည်လောက် ငါစွဲ ဖြုတ်ကြတာ ၂ ယောက်မရှိဘူး ။ စစ်တမ်းများကောက်လို့ရရင် တနေ့တနေ့ လူတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ အနည်းဆုံးအတ္တတွေ ဖြုတ်ကြ …. ငါဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာကို တခွန်းတော့ ထဲ့ ထဲ့ ပြောတတ်ကြတယ် ။ ဒီစကားက အကာအကွယ်ယူတာ ။ တဖက်သားကို အသာစီးယူတဲ့သဘော ။ ပါးစပ်ကသာ ငါစွဲဖြုတ်ကြတာ ….လုပ်ရပ်ကတော့ ငါစွဲအပြည့်ပဲ ။ ဥပမာ တခုပဲ ပြောကြည့်မယ် …. လမ်းလျှောက်နေသူအတွက် ပလက်ဖောင်းဆိုတာမရှိဘူး ။ ထဲ့ကို မစဉ်းစားတာ ။ စဉ်းစားရ ကောင်းမှန်းလဲ မသိဘူး ။ အဲ့ဒါ လူတွေရော […]
ရှမျးပွညျနယျက ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး နှီးဘုရားကွီးကို ဖူးမြှျောနိုငျရနျ တငျပေးလိုကျပါတယျ
February 11, 2020 February 11, 2020 MM Live News
ရှမ်းပြည်နယ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ပန်လင်းဆိုင်ဒေသမှာ တည်ရှိပြီးဉာဏ်တော် အမြင့်ပေ ၄၃ ပေ၊ တင်ပလ္လင်ခွေ အကျယ် ၃၆ ပေ ကျယ် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီ နှီးဘုရားကြီးကို မိုင်းဖုန်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ တည်ထားတဲ့ နှီးဘုရားကြီးဖြစ်ပြီးပန်လင်းဆိုင် ရွာသူ၊ ရွာသား ၁,၀၀၀ ကျော်တို့က ဝါးခွဲခြင်း၊ နှီးသယ်ခြင်း၊ နှီးဖျာခြင်း စတာတွေကို ညီညီညာညာနဲ့ လုပ်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ အချိန် ၆ လကျော်ခန့် ဘုရားကိုယ်ထည်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ရကြောင်း ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီ နှီးဘုရား တဆူလုံးကို ရက်ဖို့အတွက် ရွာသားများ နှီးတွေ ဖျာပေးထားပြီး အသင့်ဖျာထားတဲ့ […]
နောက်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ လာကြိုသည့်သူနှင့်အတူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားသည်။ သူ … ဒါကို သတိထားမိတဲ့အချိန် သေမင်းဟုယူဆရသည့် ဝတ်ရုံနက်ခြုံထားသောလူကြီးက သူ့ဘေးရောက်နှင့်နေပြီ။ လက်ထဲမှာလည်း တစ်ဖက်က သူကိုင်နေကျ တူရွှင်းအရှည်ကြီးနှင့်။နောက်တစ်ဖက်မှာ လက်ဆွဲသေတ္တာလေးတစ်ခုနှင့်။ သေမင်းက …ထိုမိန်းကလေးကိုပြောသည်၊”လာ … ကလေးမလေး သွားဖို့အချိ်န်တန်ပြီ” မိန်းကလေး …..”ဟင် … မြန်လိုက်တာ … သမီးမှာ လုပ်စရာ အစီအစဉ်တွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်” သေမင်း – “တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အချိန်မရှိတော့လို့ပါ …” မိန်းကလေး – “ဦးလက်ထဲက သေတ္တာထဲမှာ …ဘာတွေထည့်ထားတာလဲ?” သေမင်း – “မင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ” မိန်းကလေး – “သမီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ ဟုတ်လား ? ဦးဆိုလိုတာ သမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ ရွှေတွေ ငွေတွေကိုလား …” […]
ပိုကျဆံတဈရာဆိုတာ လကျကောကျ တဈတောငျဆဈနဲ့ လူတှအေတှကျ ဘာမှမဟုတျပမေယျ့ အဘအတှကျတော့
ပိုက်ဆံတစ်ရာဆိုတာ လက်ကောက် တစ်တောင်ဆစ်နဲ့ လူတွေအတွက် ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် အဘအတွက်တော့… မောင်လေးကိုကျောင်းပို့ပြီး မေမေကဈေးဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ စံပြဈေးထဲဝင်ပို့ပေးတာ.. သပြေပန်းဝယ်နေကြအဖိုးဆီ.. အမေသပြေပန်းရွေးနေတဲ့ ၅ မိနစ်အတွင်းလေးမှာ လာဝယ်သမျှလူတွေဟာ အဘ သပြေတစ်စည်းဘယ်လောက်လဲ.. ၃ ရာသမီး.. ၂ စည်း ၅ ရာမရဘူးလားတဲ့.. မရပါဘူးသမီးရယ် အဘအဲ့ဒီတစ်ရာလေးဘဲမြတ်တာ… ၆ ယောက်မှာ ၅ ယောက်ကအိုက်တစ်ရာလေးကို.မရမကဆစ်နေကြတာ… အဲ့ဒီထဲမှာ တစ်ယောက်ကဆို လက်ကောက်တစ်တောင်ဆစ်လောက်နဲ့ ကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်း ကုသိုလ်တွေများလာလိုက်တာ.. မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဝင်ပြောမိပါလေရော.. အမယူသွားလိုက်နော် အိုက်တစ်ရာ ညီမစိုက်ပေးလိုက်မယ်လို့ အဲ့တော့ ဘုကြည့်ပြန်ကြည့်တယ်.. သူမတက်နိုင်ဘူးထင်လို့ ကိုယ်စိုက်ပေးတာလေ.. အဖိုးလဲရောင်းရအောင်ပါ.. အဲ့လိုကျတော့လဲမဟုတ်ဖူး မယူတော့ဘူးဆိုပြီးထွက်သွားတယ်… လူတွေအရမ်းဆိုးတယ်.. လူရှင်းတဲ့ထိစောင့်ပြီးမှ အမေကသပြေပန်းဖိုးရှင်းတော့ အဖိုးကပြောရှာတယ်.. သမီးရယ်တဲ့ အဘကအရင်ကဆို အဲ့တစ်ရာကိုမမြင်ဘူး လျှော့ပေးနေကြပါတဲ့.. ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ရာ တစ်ရာနဲ့ […]
အသက် ၂၄ နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်ပိုင်း လုံးဝ မလုပ်သင့်တော့တဲ့ အရာများ ၁။ အပေါစားအဝတ်အစားတွေဝယ်တာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ လူငယ်ဘာသာသဘာဝ ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနဲ့အမီ သင်ဟာ ပေါ်ပင်ဖက်ရှင်တွေနောက်ကို လိုက်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ ပေါ်ပင်တွေနောက်ကို မလိုက်တော့ပဲ ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အများလေးစားခံရပြီး စတိုင်ကျတဲ့သူဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ဝတ်ဆင်မယ့် အဝတ်အစားတွေမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကိုစတင်လိုက်ပါတော့။ တစ်လနှစ်ခါလောက် အဝတ်အစားအသစ်တွေဝယ်ဝတ်နေမယ့်အစား အဲဒီပိုက်ဆံတွေကိုစုပြီး နှစ်လတစ်ခါလောက်မှဝယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး သင့်ကို စတိုင်ကျစေမယ့် အဝတ်အစားမျိုးဝယ်ပါ။ ၂။ ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့ချစ်သူကို လက်တွဲဖြုတ်ပါ ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့သူဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အကုန်မခံပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘဝလက်တွဲဖော်ဆီက ဘယ်လိုအချက်တွေလိုချင်လဲဆိုတာ ချရေးပါ။ အဲဒါ သင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူပါပဲ။ အသက်အရွယ်ရလာလို့ မရှိရှိတဲ့လူကို ကြိတ်မှိတ်တွဲတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်မပျော်ရွှင်မှန်း သိရက်နဲ့ အတင်းရှေ့မတိုးပါနဲ့။ […]
အသကျ ၂၄ နှဈပွညျ့ပွီး နောကျပိုငျး လုံးဝ မလုပျသငျ့တော့တဲ့ အရာမြား…